Kuongorora kunetseka uye mhedzisiro yacho - Kudzidziswa kwekuziva
Kuongorora kunetseka nemhedzisiro yacho
Iwe uripano: musha » Articles » Kuongorora kunetseka nemhedzisiro yacho
Kuongorora kunetseka kusanganiswa kwezviratidzo zvepfungwa, kusanganisira kunetseka, kutya, kusagadzikana, uye kutya kukundikana kunoitika mukati memamiriro ezvinhu umo munhu ari kuongororwa. Icho chikamu chekushushikana kwakabatana nemanzwiro ayo zvinowedzera kana munhu akasangana nekuongororwa kweyekugona kwavo.
Izvo zvinopesana nedzimwe nzira dzekushushikana kubvira chinonyanya kukoshesa mamiriro ekuongorora uye inozviratidza kwazvo pakati pevadzidzi vezvikamu zvese zvedzidzo. Iyo inowanzo taurwa nenzira dzakasiyana senge bvunzo kushushikana, kunetseka mune zvedzidzo, kana bvunzo kushushikana, uye kutsvagurudza kunoratidza kuti iripo pakati pe15% ne22% yevadzidzi.
Kuongorora kunetseka kunokanganisa mashandiro nekuda kwemhedzisiro kutarisa kwekutarisa. Uyezve, zvinosiyana kubva pamunhu kuenda kune mumwe (semuenzaniso, zvinoenderana nezera uye murume nemukadzi), zvinoenderana nemamiriro ezvinhu uye zvimwe zviitiko zveunhu uye hunhu zvinogona kuwedzera mukana wekuitika kwazvo (vanofanotaura). Pamusoro pezvo, pane misiyano yemunhu mumwe maererano nemamiriro ezvinhu.
Vazhinji vaongorori vakaedza kuyera bvunzo kunetsekana, uye akasiyana ekuyera maturusi akagadzirwa. Pakati peizvi, iyo Kwayedza Kushushikana Chikamu cheVana (TASC) inofungidzirwa chiyero chegoridhe chekuyera bvunzo kunetseka muvana.
Zvichienzaniswa neichi chivakwa chezvepfungwa, zvakadaro, kusvika parizvino zvinoita sekushaikwa kwekuzivikanwa kwakaringana kwecolorates (i.e. zvinhu zvinowirirana nhanho nekushushikana) uye vanofanotaura (kureva zvinhu zvine huvepo hunowedzera mukana wekushushikana kunoitika). Mimwe yemibvunzo yakakosha, semuenzaniso, kunetseka kuti ndezvipi zvinhu zvinokonzeresa dambudziko iri, kuti zvakabatana sei nekushushikana uye kuti zvinokanganisa sei vadzidzi.
Iwe unogona zvakare kufarira: Runako rwepuzzle: tamba kuti udzidze!
Von Der Embse uye vaunoshanda navo muna 2017, kuburikidza nemeta-ongororo yakavakirwa pane 238 yapfuura tsvagiridzo yakaburitswa kubvira 1988, vakaedza kupindura iyi mibvunzo.
Mune ino bhuku, vanyori vakatsanangura hunyanzvi hwekuongorora bvunzo pamabasa akasiyana siyana anofanira kuitwa, vachiyedzawo kunzwisisa kusiana kwehunhu uye hunyanzvi hwekudyidzana.
Izvi ndizvo zvakawanikwa zvikuru:
Gender. Vakadzi vangave vangangotaridza huwandu hwepamusoro hwebvunzo kushushikana kupfuura vanhurume.
Dzinza. Vadzidzi vanobva kumadzinza madiki vakashuma zvakanyanya kukwirisa bvunzo kunetseka kupfuura vezera.
Unyanzvi. Kuongorora kunetseka kungangoderera sezvo hunyanzvi hwevadzidzi hunowedzera.
Neurodiversity. Vadzidzi vanoonekwa kuti vane ADHD ivo vaizoratidza mwero wakakwira wekushushikana kupfuura vadzidzi vasina kuongororwa.
Mamiriro ekuongorora. Kuongorora kunetseka kungawedzera kana chero bvunzo dzikatsanangurwa senge yekuongorora munhu iyeye danho racho raizodzikira kana bvunzo dzapihwa semaekisesaizi kana mikana yekudzidza.
Kuzvitemba. Kuzvishingisa kunodzora kushushikana kuburikidza neruzivo rwekubudirira kwewakapfuura.
Maitiro ekuita. Bvunzo kushushikana, asi giredhi poindi yepakati uye bvunzo zviyero zvinoita kunge fungidziro dzebvunzo chiuno.
Grounds. Uku kuvakwa kwepfungwa kunodzora kushushikana pakati pevadzidzi uye kuvabatsira kuwedzera mashandiro avo.
Dzidzo yekubudirira zvibodzwa. Kuedza kuvandudza mashandiro emudzidzi kwaizokanganisa mashandiro edzidzo uye mhedzisiro yedzidzo.
Saka mhedzisiro yacho yaizoratidza kuti bvunzo kushushikana kwakashata kwakabatana nehupamhi hweparameter dzine chekuita nedzidzo, kusanganisira zvakaenzana bvunzo zviyero, mamakisi ebvunzo, uye yakazara giredhi average. Kuzvishingisa kunoratidzika kunge kwakakosha uye kwakasimba kufanotaura bvunzo. Iko kunzwisisika kunetsekana kwebvunzo uye kukosha kwakabatanidzwa pairi kuri zvakare zvine chekuita neepamusoro bvunzo kushushikana.
Iwe unogona zvakare kufarira: Kubva pakuverenga kusvika kumatafura ekuwedzera: zvatinoreva kana tichitaura nezvekushomeka kwemagetsi
Mukupedzisa, kubudikidza nekutsvagisa uku, vanyori vanotaura kuvapo kwehukama hwakajeka pakati pekunetseka kweongororo uye misiyano mizhinji yakatariswa. Nekudaro, pane kudiwa kwekumwe kutsvagisa kwekuvandudza bvunzo kuyera ichi chivakwa chinogona kushandiswa sekutarisa uye kuongorora akasiyana mamiriro akaoma. Maturusi aya anogona kutungamira kunzwisiso irinani yebasa remanzwiro mukuita uko kunobatsirawo kubatsira nyanzvi dzakabatanidzwa muzvirongwa zvedzidzo kuvandudza mashandiro evadzidzi.
von der Embse, N., Jester, D., Roy, D., & Post, J. (2018). Kwayedza kushushikana mhedzisiro, kufungidzira, uye kuwirirana: A 30-gore meta-analytic ongororo. Zvinyorwa zveAffective Disorders, 227, 483-493.
bvunzo kushushikana, kushanda kunetseka, kushanda kunetseka, bvunzo kushushikana
Kuongorora kunetseka nemhedzisiro yacho2020-08-302020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/lansia-da-esame-e-le-sue-conseguenze.jpg200px200px